पशु उम्दा खेलौना
कार्टून उम्दा खेलौना
शुभंकर उम्दा खेलौना
भरी टेड्डी भालु
बेबी उम्दा खेलौना
छुट्टी उपहार उम्दा खेलौना
प्रचार उपहार उम्दा खेलौना
द Esquire समर्थन स्वागत छ। भारी अनुसन्धान। राम्ररी vetted। यी रुचि तपाईँको हार्ड-कमाएका नगद खर्च गर्न सबै भन्दा राम्रो तरिका हो।
Backpacks मान्छे को बैग छन्। हामी पुस्तक र नोटबुक र डोप पेन्सिल अवस्थामा (नरम गोले मात्र, धन्यवाद) वरिपरि LUG गर्न प्राथमिक विद्यालयमा तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न सुरु गर्नुहोस्। र विद्यालय progresses रूप मा, Backpacks कूलर र थप जानिजानि प्राप्त। हाम्रो Jansport एक Herschel मा उत्तेजित गर्दछ जो एक Fjallraven, मा उत्तेजित गर्दछ। र ती Backpacks सरल आवश्यकता लागि सबै ठूलो हो! मान्छे को झोला लागि, त्यहाँ मात्र केही परिस्थिति अझ उपयुक्त जवाफ, कुनै गलत जवाफ हो। र यो विशेषज्ञ संगठन आउँदा, यो तपाईं को लागि काम सही गर्छ भन्ने कुरा खोज्दै लायक छ।
लागि दैनिक बैग, त्यहाँ आकस्मिक छ, र त्यसपछि त्यहाँ पनि आकस्मिक छ। शायद आकस्मिक को प्रकारको काम गर्न ल्याउ हुँदैन। एक पदयात्रा अप हरायो वा prepped देखिन्छ कि आफ्नो शैली लागि ठूलो केहि छैन केहि जबकि, यस डकोटा धेरै त नभइकन आकस्मिक छ। को neoprene यसलाई जो एक मानक क्यानभास देखि बाहिर खडा एक सुन्दर रूप, दिन्छ, र सबै-भन्दा रंग राख्छ न्यूनतम। ती तत्व दुवै यसलाई कुनै कुरा तपाईं लगाएका हुनुहुन्छ के वा तपाईं कहाँ लाग्यौं हुनुहुन्छ हरेक दिन राम्रो हेर्न, बनाउन को लागि आवश्यक हो। के तपाईं कहिल्यै under- वा overdressed महसुस बिना जिम गर्न, र खुसी घन्टा, कार्यालय कम्युट गर्न सक्नुहुन्छ।
समारोह यो डिजाइन पहिलो आए। expertly सकेसम्म सजिलो रूपमा आफ्नो झोला भित्र सामान पहुँच गर्न बाहिर योजना थिएन कि विवरण छैन त्यहाँ। को padded ल्यापटप मामला, यी दिन झोला पाठ्यक्रम को लागि बराबर छ साथै त्यहाँ पनि भित्र चिटिक्क र सुग्घर रहन बनाउन प्याक को बाहिर विवरणहरू छन्। अगाडि थैली मा आफ्नो कुञ्जीहरू र वालेट राख्नु, छेउमा जिप आफ्नो हेडफोन र हटाउन सकिने थैली मा आफ्नो हात प्रक्षालक। जहाँ तपाईं तिनीहरूलाई पुग्न सक्छ आवश्यकताहरु राखन फेरि कहिल्यै पनि आफ्नो झोला मार्फत खन्नुहोस् भएको तपाईंले रोक्छ।
को neoprene कपडा बाहिर हामी विवरण कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने, सबैभन्दा खडा। किनभने यो अन्य Backpacks को-एक छोटो-बस्ने क्यानभास वा hefty बैलिस्टिक नायलन बनाउनुभयो गर्दै कपडा जस्तो देखिदैन भन्ने हो। यसलाई नरम र बाउन्सी र लगाउन सहज देखिन्छ। र यो ती कुराहरू सबै छ! तर यो पनि एक कार्यात्मक कपडा छ। यो ज्यादातर वर्षा वा पसिना को रूप मा, चिस्यान Wicks। त्यो तिमी तुफान मा समातिए रही बारेमा धेरै चिन्ता छैन र तपाईं यसलाई गंध छौँ चिन्ता बिना यो मा मिठास जिम लुगा राख्न सक्छन्। ती तपाईंलाई दैनिक प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ छौँ कि एक झोला र लामो समय आउन को लागि आवश्यक घटक हो। तपाईं यसलाई सफा गर्न चाहनुहुन्छ भने, हात यो धुन र यो हावा सुख्खा गरौं। तपाईं बिहान एक ताजा झोला छ छौँ।
पोस्ट समय: अगस्ट-05-2019
RM1515A, WDL Bld।, Meilong Rd। Longhua जिल्ला, शेन्जेन
कस्मेटिक बी किन्नका लागि चार सुझावहरू छन् ...
विश्व कस्मेटिक बैग र मामला बजार ...
तपाईं alread को ब्रान्डहरु देखि मेकअप refills ...
कस्मेटिक झोलाहरू, भ्यानिटी केसहरू, प्रसाधन सामग्री पाउचहरू, तातो-सील गरिएको PVC/EVA पाउचहरू, लेडीज ह्यान्डब्यागहरू, टोट्स, स्याचेलहरू, समुद्र तटका झोलाहरू, डफेलहरू,